Nepal Auto | क्रूज कन्ट्रोल के हो ? के छ फाइदा ?
क्रूज कन्ट्रोल के हो ? के छ फाइदा ? 24 Jestha, 2075
कारमा हुने क्रुज कन्ट्रोलको सहयोगले चालकले एक्सिलरेटर बिनै प्याडल दवाएर पनि कार चलाउन सक्छन् । यसमा कारको स्पिड पहिले नै निर्धारित गर्नु पर्ने हुन्छ । यसले चालकलाई केहि हदसम्म आराम दिन्छ । क्रुज कन्ट्रोलले यात्रालाई सुविधाजनक पनि बनाउँछ ।
पहिले प्रिमियम कारमा मात्र क्रुज कन्ट्रोल उपलब्ध गराउने गरेकोमा हाल मिड रेन्जका कारमा पननि यो फिचर उपलब्ध छ ।
क्रुज कन्ट्रोल के हो ?
क्रुज कन्ट्रोल एक यस्तो फिचर हो, जुन कारको स्टेयरिङ ह्विलमा राखिएको हुन्छ । स्टेयरिङ ह्विलमा एक बटन हुन्छ, जसको सहयोगले क्रुज कन्ट्रोललाई अन र अफ गर्न सकिन्छ । यसलाई अन गरे पछि एक्सिलरेटर प्याडलमा खुट्टा राख्नु पर्ने झन्झट हुँदैन ।
सो फिचरलाई अन गर्ने समयमा कारको स्पिड पनि सेट गर्नु पर्छ । त्यसपछि त्यही क्रुज कन्ट्रोलको सहयोगले नै कार निर्धारित गतिमा कुद्छ ।
तर यदि कारलाई ब्रेक लगाइयो भने क्रुज कन्ट्रोलले पनि कार्य गर्न छोड्छ । फेरि यसलाई प्रयोगमा ल्याउनका लागि फेरि अन गरेर स्पिड सेट गर्नु पर्छ ।
क्रुज कन्ट्रोलको फाइदा
साधारणतया क्रुजकन्ट्रोलको प्रयोग ५० किमी प्रति घन्टा भन्दा माथिको स्पिडको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । हाइवे तथा सिधा लामो दुरीको यात्राको लागि क्रुजकन्ट्रोल एकदम उपयोगी हुन्छ । क्रुजकन्ट्रोल भएमा एक्सेलेटर दवाइराख्नु नपर्ने भएकोले पनि क्रुजकन्ट्रोल भएको कार चलाउने चालकलाई खुट्टाको आराम मिल्छ । यसका कारण कारले माइलेज पनि राम्रो दिन्छ ।
क्रुज कन्ट्रोलको वेफाइदा
क्रुज कन्ट्रोल अन भएका यदि चालक निदायो वा सावधानी पूर्वक कार चलाएन भने कार दुर्घटना हुन सक्छ । त्यसैले क्रुज कन्ट्रोलमार्फत कार चलाउदा उत्तिकै सावधानी अपनाउनु पर्छ जति साधारण रुपमा कार चलाउदा सावधानी अपनाइएको हुन्छ ।
क्रुज कन्ट्रोल चलाउन सडकले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको हुन्छ । जस्तो कि पिच गरेको बाटो र ट्राफिकको व्यवस्था कस्तो छ भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ । नेपालजस्तो अस्तव्यस्त सडक र ट्राफिक नियम भएको देशमा क्रुजकन्ट्रोल चलाउन केही हदसम्म वेफाइदा होला तर नेपालमा यस्तो ठाउँ पनि छ जहाँ क्रुजकन्ट्रोल चलाउन अति उपयोगी हुन्छ ।
बस चलाउँदा आफू र साथमा रहेका अन्य यात्रुको जिम्मेवारी चालकको काँधमा हुने गर्छ ।...
बढ्दो सहरीकरण र व्यस्त जीवनशैलीको कारणले यात्रा गर्न वा कही जानको लागि मोटरसाइकल...